यसरी सत्ता बार्गेनिङको अस्त्र बन्दै एमसीसी (भिडियो रिपोर्टसहित) - Himalaya Television
यसरी सत्ता बार्गेनिङको अस्त्र बन्दै एमसीसी (भिडियो रिपोर्टसहित)
२०७८ पुष ६ गते २०:५६
६ पुस २०७८ काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) दलहरुका लागि सत्ता बार्गेनिङको अस्त्र बन्न थालेको छ । कांग्रेस एमसीसी संसदबाट पारित गर्नैपर्ने पक्षमा उभिँदा गठबन्धन घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा छन् । एमसीसीले गठबन्धनमा बढाएको मतभेदलाई एमालेले चर्काउन खोजेको छ । यही बहानामा गठबन्धन तोड्ने एमालेको प्रयास शुरु भएको छ ।
एमसीसीका विषयमा साझा धारणा बनाउन सत्तारुढ गठबन्धन पटक–पटक छलफलमा जुटे । गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस कुनैपनि हालतमा एमसीसी पारित गराउन चाहन्छ तर, अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नहुने माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अडान छ ।
सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र पास गर्न सकिने यी दलको भनाइ रहँदै आएको छ । तर, एमसीसीले संशोधन गर्ने कुनै संकेत गरेको छैन बरु छिटोभन्दा छिटो पारित गराउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको छ । अन्तिम डेडलाइनको समय समेत घर्किसकेकाले एमसीसीलाई छिटो टुंग्याउन ताकेता गरिहेको छ । त्यसैले पनि कांग्रेस एमसीसी पारित गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा छ ।
तर, कांग्रेसकै सत्ता साझेदार दलहरु मानिहाल्ने पक्षमा छैनन् । अन्य वैदेशिक सहयोगभन्दा फरक बनेको एमसीसी तल्लोतहसम्म गिजोलिएको छ । जनतामा एमसीसी अमेरिकी सैन्य योजना रहेको भ्रम छरिएको छ । जसले राजनीतिकरुपमा घाटा हुने विश्लेषणसहित सत्तारुढ माओवादी र एकीकृत समाजवादी हच्किएका छन् । त्यसैले उनीहरु केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उभिए । अहिलेकै अवस्थामा पास गरे चुनावी घाटा हुनसक्ने उनीहरुको आंकलन छ । त्यसैले माओवादी र समाजावदी संशोधन हुनुपर्ने रटानमा रहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा देखिएको यो विवादलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नजिकबाट हेरेको छ । एमसीसीरुपी सियोले गठबन्धनको बेलुन फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा एमाले देखिन्छ । त्यसैले उसले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने त्यसको बदला अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने शर्त राखेको छ । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने भए कांग्रेसलाई साथ दिन सकिने बताउनुभएको छ ।
सरकारमा रहँदा एमाले एमसीसीको पक्षमा उभिएको थियो । तर अहिले मौन बसेको एमाले गठबन्धनको गडबडीलाई हतियार बनाउँदै कांग्रेसलाई फकाउने दाउमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यही एमसीसीले नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृश्य बदलिने हो कि भन्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
अन्ततः ओलीपथमै किन लागे नेपाल ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
मन्त्री फिर्ता गर्ने समाजवादीको निर्णय अपरिपक्वः माओवादी नेता शर्मा (भिडियो रिपोर्टसहित)
वामदेवद्वारा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान नामक पार्टी घोषणा
विवादको भूमरीमा एकीकृत समाजवादीः अप्ठ्यारोमा माधव नेपाल, मन्त्री हेरफेरको लफडा कायमै (भिडियो रिपोर्टसहित)
वामदेवले थालेको वाम एकता सम्भव छ त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
संघ र प्रदेश निर्वाचनमा २० लाख मत प्राप्त गर्नुपर्छः अध्यक्ष नेपाल (भिडियो रिपोर्टसहित)